Radio shuttle rack ndeye mhando nyowani yekuchengetedza mhinduro. Iyi sisitimu ine forklift, racking system uye shuttle. Forklift inotakura zvinhu muchivharo.
Shuttle inongoerekana yatora nhumbi kuita racking system uye wozadzika yekuchengetedza basa. Radio shuttle inogona kushanda ichienderera kuitira kuti basa rese rekuita riwedzere. Iyo shuttle inogona kubhadhariswa kanopfuura ka1000 nguva.
Kuwedzera nzvimbo yekuchengetera
◆ Kuita kuti igadzikane neyakajairika Dhiraivha-kuburikidza chimiro
◆ Kuderedza mashandiro emari
◆ Kuti uwedzere kudzora kwakaringana
◆ Yemahara 3D dhizaini yemifananidzo
Isu tinopa Radio shuttle racking 2021 yemhando yepamusoro ambient uye inotonhora imba ine 1 makore mhando garandi. Isu tinozvipira kudura rekuchengetera munda kwemakore makumi maviri neshanu. Tiri kutarisira kuva wako kwenguva refu naye mu China.
Radio shuttle racking 2021 yemhando yepamusoro ambient uye inotonhora imba ine chitupa cheSGS.BV uye TUV
1.Product sumo redhiyo shuttle anonetsa
Hegerls radio shuttle racking ndeye yakakwira density nzira yekuchengetedza. Inogona kuve yekutanga mune yekutanga kubuda kana yekutanga mune yekupedzisira kubuda. Hapana chikonzero chakanyanya kuwanda uye chaigona kuwedzera iyo yekuchengetera nzvimbo mashandisiro 50%.
Saizi Pallet Loading Mashoko Ruvara Bhaudhi & nzungu
1200 * 1000 1500kgs SS400 RAL5005 / RAL2004 zvaisanganisira
4.3 makuru mashanu mabasa
Kuisa, kuburitsa, kuenderera kwekuisa, kuenderera kuburitsa, hesheni, kufambisa pallet.
Pashure: HEGERLS cantilever racking
Zvadaro: Yakakwira-simbi Warehouse Shuttle Kuchengetedza Sisitimu
Four Nzira Radio Shuttle
Amai Shuttle Cart
Nhovo Runner System
Radio Shuttle Mumhanyi